WTF!!! Where is unsubscribe link - Saturngod
ရန်ကုန်မှာ အင်္ကျီဝယ်တုန်းက ကံစမ်းမဲ form လေးပေးလို့ email ပါ ထည့်ဖြည့်လိုက်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ကြော်ငြာတွေ အလကားနေရင်း ဝင်လာတယ်။ ဒါနဲ့ Filter လုပ်ထားလိုက်ရတယ်။ အဲလိုပဲ တက်ခဲ့ဘူးတဲ့ သင်တန်းတွေရဲ့ ကြော်ငြာတွေလည်း ခဏခဏ ဝင်လာတယ်။ အဲဒါတွေလည်း Filter လုပ်ရတာပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံက ပို့တဲ့ Mail တော်တော်များများက unsubscribe link မပါလာဘူး။ အဲဒါက Spam နဲ့ အတူတူပဲဗျ။ တကယ်လို့ သတင်းတွေ ပို့ချင်တယ်ဆိုရင်တောင် အနည်းဆုံး မလိုချင်တဲ့အခါမှာ Unsubscribe လုပ်ခွင့်ရသင့်တယ်။ ကြည့်ရတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ email marketing ဆိုပြီး email ပဲ အကုန်လုံးကို To တွေ ခံပြီး ပို့တယ်နဲ့တူတယ်။
ကိုယ်ပို့လိုက်တဲ့ email ကို ဘယ်နှစ်ရောက် ဖွင့်ဖတ်ပြီး ဘယ်နှစ်ယောက် click တယ်။ ဘယ်နိုင်ငံတွေက အများဆုံး ဖတ်တယ်။ ဘယ် device တွေက နေ အများဆုံး ဖတ်ကြတယ်။ စတဲ့ data တွေကို စိတ်ဝင်စားပုံမရဘူး။ ပြီးပြီးရော ပို့လိုက်တာပဲနဲ့တူတယ်။ Attatment file ထည့်။ ပြီးတော့ to ထဲမှာ အကုန်ထည့်။ Send လုပ်။ အဲဒါဆိုပြီးပြီလို့ မှတ်ယူထားပုံပဲ။
ပို့တဲ့ mail တွေက ကြော်ငြာဖြစ်ပေမယ့် မလိုချင်တဲ့ အခါမှာ ပြန်ပြီး unsubscribe လုပ်ခွင့်မရှိတော့ဘူး။ မကျေနပ်ရင် filter လုပ်ထားလိုက်ဆိုတဲ့ ပုံစံ မျိုး ဖြစ်နေတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ကြော်ငြာတွေ ရောက်လာတိုင်း မြန်မာပြည်မှာ survey ဖြည့်တဲ့အခါမှာ ဖြစ်ဖြစ် ကံစမ်းမဲတွေ ဖြစ်ဖြစ် email ထည့်ခဲ့မိတာကို နောင်တ ရနေမိတယ်။ email marketing လုပ်မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး email marketing အကြောင်းကို အနည်းငယ် ဖတ်ထားသင့်တယ်။ အခုဟာက Spam mail လိုပို့တာကတော့ ဆိုးတယ်။ customer ကို ဂရုမစိုက်သလို မျိုး ဖြစ်နေတယ်။
Bacn is OK
Spam ထက်စာရင် Bacn က တော်သေးတယ်။ Bacn က “better than spam but not as good as personal messages” လို့ ဆိုရမှာပဲ။ လိုချင်တဲ့အခါမှာ subscribe လုပ်ထားခဲ့ပေမယ့် မလိုချင်တဲ့အခါမှာ unsubscribe လုပ်ထားလို့ရတယ်။ အခုက မလိုချင်ပဲနဲ့ ကြော်ငြာတွေက ရောက်ရောက်လာတယ်။ လိုချင်မှ subscribe လုပ်ခွင့်ပေးတဲ့ program လေး ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ အခုတော့ လက်ရှိ email ထဲမှာ ကြော်ငြာပို့တဲ့လူတွေ အားလုံးကို filter လုပ်ပြီး trash ထဲ ထည့်ထားတယ်။
Our Inbox is not unlimited
Gmail က အရင်တုန်းကသာ သင့်ရဲ့ Inbox က mail ကို ဖျက်စရာမလိုဘူးလို့ အော်ခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ 7GB ပဲ ပေးထားတော့တယ်။ နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့ အမျှ mail တွေ များများလာတယ်။ ကြော်ငြာတွေက စာနဲ့ မဟုတ်ပဲ ပုံတွေနဲ့ ပို့တော့ size တွေက တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်။ အများအားဖြင့် ကိုယ်ပိုင် email ထက်စာရင် Forward email တွေ ကြော်ငြာတွေက mail box ထဲမှာ များနေတယ်။ အဲဒါတွေကို ရှင်းထုတ်လိုက်ရင် inbox က နည်းနည်း ပိုရှင်းသွားတယ်။ ပိုပြီး space တွေ ရလာတာပေါ့။
Email Marketing လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားရင် newsletter ကို အသုံးပြုပါ။ ကြော်ငြာ ဒီအတိုင်းထည့်တာထက် newsletter သဘောမျိုးနဲ့ လုပ်ပြီး ပို့ပါ။ ဥပမာ။။ ဒီ လ ဘာ အသစ်တွေ ထွက်လဲပေါ့။ ဘာတွေ နဲ့ လုပ်ထားတယ်။ ဘာကြောင့် ကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးလေ ရေးပါ။ La Tendo ဆိုရင် ကျွန်တော် subscribe လုပ်ထားတယ်။ One Piece Figure အသစ်လေးတွေ ထွက်ရင် မဝယ်ဖြစ်ရင်တောင် ဘာအသစ်ထွက်လဲ သိရအောင်။ Smashing Newsletter လည်း subscribe လုပ်ထားတာပဲ။ အဲဒါတွေကို ကြော်ငြာဆိုတာထက် ဖတ်ချင် သိချင်တဲ့ အရာလို့ သတ်မှတ်ထားတာ ကြောင့်လည်း ပါတယ်။
အလွယ်ဆုံး email marketing က mailchimp ကို သုံးပါ။ ဒါမှမဟုတ် joomla တို့ wordpress တို့ကို အသုံးပြုထားရင် newsletter addon , plugin တွေကို အသုံးပြုလို့ရတယ်။ subscribe လုပ်ထားတဲ့သူတွေကိုပဲ mail ပို့ပါ။ စိတ်မဝင်စားတဲ့သူတွေကို ပို့တဲ့အခါမှာ မေတ္တာပို့ခံရတာပဲ ရှိလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့် company တံဆိပ်ကို တန်ဖိုးထားတဲ့ အနေနဲ့ Email Marketing လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားရင် အရင် လေ့လာပါ။ contact list ထဲမှာ ရှိတဲ့ email တွေ အားလုံးကို ပို့လိုက်တာဟာ customer ကို မလေးစားသလိုပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။
« Before host on VPS New MYSTERY ZILLION »
Even the ads from big business like inyalakehotel doesn’t include the link to unsubscribe in their newsletter, not to mention small business.
For me, I first try to reply that I don’t want to receive such email since I am no longer applicable. Then I just filter and mark as spam if they don’t monitor that mail box and keep sending me.
အကို Blog နဲ့ MZ မှာ မြန်မာဖောင့် ဖတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ။ ဘယ်ဖောင့် တင်ရမလဲ ဗျ။
use yunghkio. I already gavealink in right side bar.
I’m using unicode font.
I use mailchimp for investmyanmar.net
Before host on VPS